Iakhawunti yokuThengisa ye-Forex -Ieakhawunti eziNgcono ze-Forex, Vula iakhawunti yeNene ngoku ngeFXCC
Kwi-FXCC sinika uluhlu lwe-ECN
iiakhawunti ukuze zilungele bonke abathengisi.
Nokuba yeyiphi inqanaba lokurhweba
amava okanye iimfuno, siyakholelwa
sineakhawunti efanelekileyo yakho
UVAVANYO LWENTSHONA KWE-ECN
Ukusasazeka okungafaniyo Ukusuka 0.0 Pips Akukho khomishini
Hayi IComposit 0.01 uLote ubungakanani 1: 500 Ubungakanani boMax free Inkxaso 100% Idiphozithi yokuqala ibhonasi ECN Uhlobo loPhumezo EA iyafumaneka YamaSulumane iakhawunti Ukuhlamba Vunyelwe
Akukho dipozithi incinci
UkuKhuselwa okuLungeleleneyo kokulingana
100% Ibhonasi kwiDiphozithi yokuqala *
Imali yeSiseko efumanekayo
ENew York, eLondon, eJamani, eHong Kong
I-Forex, iMetali, amandla, ii-Indices
Ukuthengiswa kweendaba kuvunyelwe
Ukutshintsha iAkhawunti yamaSilamsi
Akukho Min. Misa Umgama Welahleko
Imigaqo neMeko yeBhonasi
Qala nge-Akhawunti yokuThengisa i-Demo ye-Demo
Enoba umrhwebi wakho omtsha okanye onamava, iakhawunti ye-demo yomngcipheko yindlela elungileyo yokufumana izibonelelo zokurhweba nge-ECN ngeFXCC. Ziqhelanise nezakhono zakho zokurhweba kwangaphambili okanye ukuvavanya iindlela ezintsha zotyalo-mali.
Ixabiso lexesha langempela kunye nokunyaniseka kwangaphambili kwemakethe Jonga iitshathi, iindaba kunye nohlalutyo
Ukufikelela kwi-Metatrader4 yokuthengisa Ziqhelanise ukuthengisa nge-$ 10.000 imali ebonakalayo
I-ACCEM DEMO ACCOUNT
I-akhawunti yethu ye-ECN i-XL inezo zonke iimpawu kunye nezibonelelo onokuzilindela kwaye zifuna kumthengisi we-ECN / STP oye wahlala echanekileyo ekuphuculeni intengiso. Umthengisi oye wanceda ukuloba ikamva le shishini. Enyanisweni kwi-FXCC sikholelwa ukuba le akhawunti ye-ECN ayisisiseko nhlobo. Ngenye yee-akhawunti eziphambili kakhulu zezohwebo, ezipheleleyo zizinto kunye neenzuzo, ngoku zikhoyo kwi-forex yoshishino.
Kwi-FXCC sihlala sisebenzisa isiqubulo esisamkeleyo kule minyaka idlulileyo; "kwii-acorn ezincinci ii-oki ezinkulu ziya kukhula". Wonke umrhwebi we-ECN uqala kwenye indawo yiyo loo nto wonke umthengi we-FXCC ephathwa njengomntu, i-VIP, oya kuthi ayonwabele inqanaba lakhe lenkonzo. Abaxhasi banokuvula iakhawunti ye-ECN XL kwaye bonwabele inqanaba elifanayo lokunikezelwa kwenkxaso epheleleyo kunye nenkonzo ngokungathi bangumthengi we-VIP. Uyakonwabela ukunyuka ukuya kuthi ga kwi-1: 500 kwaye uya kuba nakho ukusebenzisa imodeli ye-ECN / STP yorhwebo lwe-forex esincedileyo ukuba sibe ngoovulindlela.